Super Mario Run ndiyo yatove inobudirira kwazvo yemahara mutambo paApp Store | IPhone nhau
Super Mario Run ndiyo yatove yakabudirira kwazvo yemahara mutambo paApp Store
Zvaifanira kuitika. Kubva panguva iyo izwi raMario Mario (hongu, zita rimwe chete uye zita rezita) rakanzwika mune yakakosha Svondo yapfuura, iyo hype yakanga ichiwedzera uye ichiwedzera kusvika nezuro, panguva iyoyo, pakupedzisira, yakamhara zviri pamutemo muApp Store. Pakange pasina vashoma vashandisi vaida kurodha pasi Super Mario Run uye tanga kutamba zita razvino repombi inozivikanwa, sezvakaratidzwa nekubudirira kwaari kuita muchitoro cheApple.
MuApp Store muSpain, zvirinani panguva yekunyora iyi mitsara, hatigone kuona Super Mario Run pakati pezvikwereti zvakabhadharwa izvo zvakagadzira purofiti yakawanda (uye kune zana nemakumi mashanu), izvo zvinoratidza kuti chero isu hatisi kuidawo zvakawanda kana isu hatisi kujekesa nezve kuburitswa kwe € 150 iyo ivo vanotikumbira kuti tivhure mutambo wese. Kana izvozvo Ndiyo yakanyanya kurodha mahara application pamberi peWhatsApp, iko kunonyanya kushandiswa mameseji kunyorera pasi rino iro rinogara riri rekutanga kana padyo nerekutanga pane urwu runyorwa.
Super Mario Run inorohwa muApple Stores kutenderera pasirese
Mune dzimwe nyika, seUnited States, kuburitswa kweNintendo kuchangobva kuitika Icho chiri zvakare mune yekutanga chinzvimbo mune runyorwa rwezvishandiso izvo zviri kuburitsa iyo yakawanda mabhenefitiIzvo hazvishamise zvakanyanya kune kwese kufambiswa kwayakatambira kubva munaGunyana. Muchokwadi, zvichangoitika, pamusoro peiyo iPad App Store, zvese zvatakaona zvaive mifananidzo yemutambo iyo, kana yabatwa, yakatibatanidza neSuper Mario Run.
Kuona kubudirira kuri kuitwa naSuper Mario Run, ini pachangu ndakasara ndichizvibvunza kuti chii chingaitika kana Nintendo ichatanga mutambo neiyo protagonist iyo isina kutambwa neruoko rumwe, ndiko kuti, iyo yanga isiri mumhanyi izvo hazvitibvunze isu zvakawandisa zvevashandisi. Chinhu chakanaka ndechekuti uyu wekutanga mutambo wepamutemo wepombi yeIOS unoshandira chiJapan vhidhiyo yemutambo hofori kuyera chishuwo chaicho chevashandisi kutamba naMario uye inogona kuvakurudzira kuti vagadzire mimwe mitambo yakazara iyo, semuenzaniso, yatinogona kutamba nayo MFi controller pane iyo iPad kana Apple TV. Ungazvifarira here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » App store » Super Mario Run ndiyo yatove yakabudirira kwazvo yemahara mutambo paApp Store
Haisi yemahara…. Iyo inoita kuti iwe utambe 3 skrini uye kubva ipapo inokukumbira iwe € 9 kuti urambe uchitamba
Mhoroi, Salva. Iyo kurodha pasi mahara uye iri panhamba 1 chinzvimbo chechikamu icho. Mutsamba:
Iwe unogona zvakare kuona mune iyo skrini kuti iyo "Yemahara" chikamu chakasarudzwa. Mune chinongedzo kuApp Store inoisa izwi rimwe chete.
Ehe, asi ipapo iwoyo hausi mutambo, idemo yekutenga mutambo.
Mhoro Sebastian. Ini ndinonzwisisa zvaunoreva, asi nzira yakanakisa yekuve chinangwa kushandisa mazwi uye zvikamu zvavanoonekwa muApp Store. Kune rimwe divi, chinyorwa ichi chinotaura nezve ese emahara mafomu ekushandisa uye iwo anounza mabhenefiti akawanda.